इजि लेन्टल शेफर्डको पाई (शाकाहारी) - व्यंजनहरु
केचपको साथ कोका कोला चिकन व्यंजन
कोर्निस कुखुरा संग के छ
मशरूम सूप कुखुरा तत्काल भाँडो को क्रीम
नुहाउने र शरीरले साबुन वितरक रिफिलहरू काम गर्दछ
इजि लेन्टल शेफर्डको पाई (शाकाहारी)
यो शाकाहारी शेफर्डको पाई परम्परागत संस्करणमा तपाईंले अपेक्षा गर्नुहुने सबै स्वादहरू छन् तर दालको हार्दिक भलाईको साथ!
टेन्डर मसूर दाल कोठरीमा मिसाइन्छ, क्रिमी मैश गरिएको आलुको साथ माथि हुन्छ र सुनौला पूर्णतामा पकाउँदछ! यस सजिलो खाना एक मांसविहीन मनपर्ने को रूपमा वर्ष को कुनै पनि समय सेवा गर्नुहोस्।
दाल शेफर्डको पाईमा सामग्रीहरू
एक सत्य गोठालोको पाइ रेसिपी भेडाको साथ बनाइएको छ।
यदि तपाइँ जमिनमा गोमांस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो वास्तवमा कुटीज पाईमा परिणत हुन्छ ... र यस अवस्थामा हामी मासु प्रतिस्थापन गर्न दाल प्रयोग गर्दैछौं।
LENTILS दाल लगभग कुनै मा मासु को लागि एक स्वादिष्ट, स्वस्थ र सस्तो विकल्प हो ग्राउन्ड गाई डिश ! १ कप सुकेको मसूरले प्राय: रेसिपीहरूमा १ पाउन्ड ग्राउन्ड गोमांस प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ।
VEGETABLES यदि मसँग यो हातमा छ भने, म यो रेसिपीमा ताजा भेजीहरू प्रयोग गर्दछु। यदि तपाईंसँग ताजा सब्जीहरू उपलब्ध छैनन् भने, स्थिर मिश्रित तरकारीहरू प्रयोग गर्नुहोस् र मटरको साथ तिनीहरूलाई थप गर्नुहोस्।
SAUCE यस नुस्खाको लागि चटनी अलिकति पीठोबाट शुरू हुन्छ र दालबाट बाँकी ब्रोथ। मसूरको प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाईंले बढी वा कम श्रोथ थप्न आवश्यक पर्दछ। Cup कपको साथ सुरू गर्नुहोस् र एकपटक तपाईंले भेजी र दाल जोड्नुभयो जस्तो देखिन्छ, यो चिसो बढ्दै जान्छ। आवश्यकता अनुसार थप शोरबा थप्नुहोस् (म4कप थप्दछु)।
यदि तपाईं धेरै धेरै शोरबा थप्नुहुन्छ भने, यो गाढा नहुञ्जेलसम्म उमाल्न दिनुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् डिश बेक गर्ने बित्तिकै यो चिसो अझ गाढा हुनेछ।
म्यासिएको पोटेटोहरू मलाई क्रीमयुक्त घरमा बनाइएको आलू यो रेसिपीका लागि उत्तम टोपिंग हो, तिनीहरूलाई सजिलैसँग फैलाउनुहोस् वा राम्रो टोपिंगको लागि तिनीहरूलाई पाइप गर्नुहोस्। म यो नुस्खा मा चीज थप्न छैन तर तपाईं पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, प्रयोग गर्नुहोस् फुलिएको फूलगोभी झारिएको आलुको ठाउँमा।
कसरी कुटेज चीजबाट रिकोटा चीज बनाउन
स्वाप दाल क्यान्ड दालका लागि (सुकाइएको र कुल्ला) र उमाल्ने चरण छोड्नुहोस् (जहाँ आवश्यक छ सॉसको लागि श्रोथ थप्दै)।
होममेड छोड्नुहोस् चटनी र टमाटर सूप को एक डिब्बा को लागी विकल्प, यो एक आश्चर्यजनक स्वादिष्ट सास बनाउँछ। केवल पनीरमा सास ईन्ग्रेनिडहरू लाई छोड्नुहोस् र कन्डेन्डेड टमाटर सूपको डिब्बा सिधा मिश्रणमा थप्नुहोस्।
यसको लागि ताजा सब्जाहरू व्यापार गर्नुहोस् स्थिर भेज धुने र काट्ने छोड्नुहोस्।
ट्रेड होममेड मसलेको आलु बाँकी मैश गरिएको आलुको लागि वा स्टोर-खरिद गरिएको (वा लसुन मैस एक स्वाद बढावा को लागी)!
कसरी शाकाहारी शेफर्डको पाई बनाउने
यस भाँडो बनाउनको लागि सजिलो छ (यद्यपि यसले केहि समय लिन सक्दछ)। चरणहरूको एक द्रुत सिंहावलोकन ...
शोरबामा सिलेर मसूर।
जब दाल उमालेको छ, पातहरू काट्नुहोस् र नरमहरू छोडिदिनुहोस् (वा यो चरण छोड्नुहोस् र स्थिर सब्जी प्रयोग गर्नुहोस्)।
भेजी र सॉस सामग्रीको साथ दाल जोड्नुहोस्। गाढा नहुञ्जेलसम्म तनाव।
एक मा राख्नुहोस् गहिरो डिश पाई प्लेट र टुक्रिएको आलुको साथ शीर्ष।
सुनहरी र बबली सम्म बेक गर्नुहोस्! यत्ति सजिलो र यमीदार!
के मसूरको गोठालोको पाइ शाकाहारी हो?
यो हुन सक्छ!
यो शाकाहारी पकवान बनाउनका लागि तरकारी ब्रोथ प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस् र नियमित वर्सेस्टरशायर सास प्रतिस्थापन गर्नको लागि ए शाकाहारी वोर्स्टरशायर सॉस ।
अधिक मांसविहीन मुख्यहरू
घरेलु मसूर दाल
भुनी सब्जी Lasagna
बेक्ड म्याक र चीज
क्रकपट आलु सूप
क्रीमयुक्त मूंगफली थाई नूडल्स
मसूरको मैला जो
सजिलो मसूर गोबरको पाई
तयारी समयबीस मिनेट कुक समय१ घण्टा कुल समय१ घण्टा बीस मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन मसूरको गोठालोको पाईमा कोमल दाल हुन्छ, बृद्ध ब्रोथी ग्रेभीमा, क्रीमयुक्त मसलाइएको आलुको साथ माथि हुन्छ र बुब्लीसम्म बेक्दछ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ कप खैरो दाल वा हरियो मसूर
▢.- कप तरकारी ब्रोथ वा गोमांस शोरबा शाकाहारी बनाउँदैन भने
▢½ कप प्याज काटिएको
▢१ कप काटिएको च्याउ लगभग o औंस
▢१ गाजर काटिएको
▢½ कप फ्रिज गरिएको मटर डिफ्रोस्टेड
▢½ चम्चा पीठो
▢। चम्मच रातो रक्सी
▢दुई चम्मच वोर्स्टरशायर सॉस (यदि चाहियो भने शाकाहारी वोर्स्टरशायर सॉसको प्रयोग गर्नुहोस्)
▢। चम्मच गोलभेडा अचार
▢दुई चम्मच अजमोद काटिएको
▢२ ½ कप आलू तयार छ
मसूरको दाल र cup कप ब्रोथलाई एक सासप्यानमा मिलाउनुहोस् र फोकामा ल्याउनुहोस्। तताउने र कभर गर्मी घटाउनुहोस्। २०-२5 मिनेट पकाउनुहोस् वा दाल कोमल नभएसम्म।
यस बीच, प्याज र गाजर नरम नभएसम्म प्याज, मशरूम, गाजर, र जैतूनको तेल मा अजवाइन पकाउनुहोस्। पीठोमा चलाउनुहोस् र १ मिनेट बढी पकाउनुहोस्।
मसूर (र उनीहरूको शोरबा), रातो दाखमद्य, वोर्सेस्टरशास सस, र टमाटर पेस्ट थप्नुहोस्। मटरमा चलाउनुहोस् र उमालेको १० मिनेटमा सास सिर्जना गर्न आवश्यक रूपमा थप शोरबा थप्नुहोस्। अजमोद र स्वाद मा नुन र कालो मिर्च संग मौसम मा चलाउनुहोस्।
चम्मच दाल मिश्रण ए मा गहिरो-डिश पाई प्लेट । टिपिएको आलुको साथ माथि र २०-२5 मिनेट वा आलु खैरो नभएसम्म बेक गर्नुहोस्।
ताजा तरकारीहरू १/२ कप स्थिर सब्जीको साथ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि पकाउँदा र चिसो हुँदा सस गाढा हुनेछ। म सामान्यतया यो नुस्खाको लागि पूर्ण4कप ब्रोथ जोडेर समाप्त गर्छु। हल्का गाढा गर्नको लागि उस्काउनुहोस्।
क्यालोरिज:२0०,कार्बोहाइड्रेट:पचासg,प्रोटिन:१g,मोटो:दुईg,पागलिएको बोसो:१g,सोडियम:9 9मिलीग्राम,पोटासियम:907मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:6g,भिटामिन ए:२18१IU,भिटामिन सी:32मिलीग्राम,क्यालसियम:। 44मिलीग्राम,फलाम:।मिलीग्राम
कीवर्डमसूर गोठालोको पाई, मीटलेस, शेफर्डको पाई, शाकाहारी कोर्सक्यासरोल, मुख्य पाठ्यक्रम पकाइयोअमेरिकी, आयरिश© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।